मन्त्रिपरिषद् बैठक | Ratopati
आज मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै, लकडाउनबारे के होला निर्णय ? access_timeसाउन २६, २०७७
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषदको बैठक सोमबार बस्दैछ । सोमबार बेलुका ५ बजेलाई बैठक बोलाएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । आजको बैठक नियमित भएपनि कोभिड–१९ सम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णय हुनसक्ने ती मन्त्रीको भनाइ छ । बालुवाटार स्रोतका अनुसार यसअघिका निर्णय कार्यान्वयनका सव...
मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै, कोरोनाबारे महत्त्वपूर्ण निर्णय हुनसक्ने access_timeसाउन १९, २०७७
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठक सोमबार बस्दै छ । सोमबार साँझ ५ बजेपछिका लागि बैठक डाकिएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । ती मन्त्रीका अनुसार आजको बैठक नियमित भएपनि कोरोनाको विषयमा थप छलफल गरी महत्त्वपूर्ण निर्णय हुन सक्छ । पछिल्लो समय उपत्यकासहित देशभर कोरो...
भदौ १ गतेदेखि हवाइ उडान खोल्ने सरकारको निर्णय access_timeसाउन ५, २०७७
काठमाडौं । सरकारले भदौ १ गतेदेखि हवाइ उडान खोल्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले आगामी भदौ १ गतेदेखि आन्तरिक र बाह्य सबै व्यवसायिक उडान खोल्ने निर्णय गरेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री योगेश भट्टराईले जानकारी दिए । ...
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका १५ निर्णय access_timeअसार २५, २०७७
सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक सवारी साधन चल्न दिने निर्णय गरेको छ । गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका डा. युवराज खतिवडाले बिहीबारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा कोभिड–१९ का सन्दर्भमा थप निर्णय ...
संसदको वर्षे अधिवेशन स्थगन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय access_timeअसार १८, २०७७
काठमाडौं । सरकारले संघीय संसदको वर्षे अधिवेशन स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले संघीय संसदको वर्षे अधिवेशन स्थगन गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । ती मन्त्रीका अनुसार संसद् अधिवेशन आजै बेलुका पाँच बजेदेखि स्थगन गर्ने ...
मन्त्रिपरिषद् बैठक आह्वान access_timeअसार १८, २०७७
काठमाडौं । आज आकस्मिक रुपमा मन्त्रिपरिषद बैठक बस्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज दिउँसो १२ बजेका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । उनका अनुसार आजको बैठक चालु वर्षे अधिवेशन बन्द गर्ने निर्णय गर्ने बुझिएको छ । त्य...
बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी, के होला निर्णय ? access_timeअसार १५, २०७७
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसिरहेको छ । बैठक साँझ ६ बजेदेखि सुरु भएको हो । बैठकमा कोरोना महामारी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि चाल्नुपर्ने थप कदमका विषयका साथै हवाइ सेवा सञ्चालनका विषयमा छलफल हुने बुझिएको छ । यसअ...
लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै access_timeजेठ २२, २०७७
काठमाडौँ । सरकारले कोरोनाभइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि अपनाएको लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने भएको छ । त्यसबारे निर्णय गर्न बिहीबार अपरान्ह चार बजेका लागि मन्त्रिपरिषद बैठक बोलाइएको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले लकडाउनबारे निर्णय हुनसक्ने एक मन्त्रीले रातोपाटीलाई जानकारी...
आज साँझ ५ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक access_timeजेठ १२, २०७७
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आज साँझ ५ बजे मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दैछ । आजको बैठकमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि संसदमा प्रस्तुत गर्ने बजेट, जारी लकडाउन, कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गर्ने थप कार्यहरु लगायतका विषयमा छलफल हुने एक मन्त्रीले...
मन्त्रिपरिषद्मा विदेशी प्रभाव access_timeफागुन ६, २०७६
देशमा विदेशीको हस्तक्षेप कुन हदसम्म छ भन्ने हालेैकै सरकारको एक निर्णयबाट थाहा भएको छ । पर्यटक भिसामा बसेर विभिन्न कम्पनीमा काम गर्ने विदेशीलाई गृह मन्त्रालयले कारबाही थालेपछि उनीहरुले आफूहरुलको मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय नै गराउन सफल भएका छन् । विभिन्न प्रोजे...
यी हुन् मन्त्रिपरिषदका ३२ निर्णय access_timeमाघ ९, २०७६
काठमाडौँ । सरकारले जनकपुुर जयनगर बर्दिबास रेलसेवा सञ्चालनका लागि आवश्यकताका आधारमा ४५ पदमा २ सय २६ कर्मचारी करारमा लिने भएको छ । बिहीबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा भएको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले नेप...
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका १४ निर्णय access_timeपुस १७, २०७६
काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद्को पुस १४ गते बसेको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गरिएको छ । बिहीबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाले सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरेर बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् । १४ गतेको बैठककले ऋण असुली न्यायाधीकरणको रिक्त ब...
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का ३ वटा बैठकका १६ निर्णय access_timeकात्तिक २१, २०७६
काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद्को गत १७, १८ र २० गते बसेको ३ वटा बैठकले विभिन्न १६ वटा निर्णय गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्काटोले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् । बैठकका निर्णय यसप्रकार छन्ः ...
प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्न सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलायो access_timeकात्तिक १८, २०७६
काठमाडौँ । नयाँ प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिका लागि छलफल गर्न सरकारले सोमबार बिहान मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएको छ । बैठक बिहान ११ः०० बजे बस्ने बताइएको छ । आइतबार बिहान पनि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्षमा भगवान कोइराला र त्रिभुवन विश्ववि...
सार्वजनिक जग्गाको हिनामिना छानविन गर्न २ महिना म्याद थपदेखि यस्ता छन् मन्त्रिपरिषदको १९ निर्णय access_timeभदौ २६, २०७६
काठमाडौं– सरकारले हिनामिना भएका सार्वजनिक जग्गाको थप छानविन गर्न २ महिना थप्ने निर्णय गरेको छ । यसै साता बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । २०७५ फागुन २८ गते गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयअनुसार गठित सरकारी, सार्वजनिक, गुठी र सरकारद्धारा अधि...
भिडियो कन्फ्रेन्सबाट मन्त्रिपरिषद् बैठक गरिएकोमा काँग्रेसको गम्भीर आपत्ति access_timeभदौ १०, २०७६
काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले भिडियो कन्फ्रेन्सबाट मन्त्रिपरिषद् बैठक गरिएकोमा गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा नेपाली काँग्रेसका सांसदहरुले यथास्थानबाट उठेर सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउँदै भिडियो कन्फ्रेन्सबाट मन्त्रिपरिष...
तस्बिरमा हेर्नुहोस् टेलिकन्फ्रेन्समार्फत बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठक, नेपालमा नयाँ प्रयोग access_timeभदौ ९, २०७६
काठमाडौं–पहिलोपटक टेलिकन्फ्रेन्स मार्फत मन्त्रिपरिषदको बैठक बसेको छ । उपचारको क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सिंगापुरमा रहेको बेला प्रविधिको उपयोग गर्दै पहिलो पटक टेलिकन्फ्रेन्सबाट मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको हो । बैठकबारेको फोटो सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्रीका...
पहिलोपटक भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत् क्याबिनेट बैठक बस्दै access_timeभदौ ९, २०७६
काठमाडौँ । नेपालमा पहिलो पटक भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत् सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दैछ । नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत् सोमबार दिउँसो १२ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरवारमा मन्त्रिपरिषद बैठक बस्न लागेको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्...
प्रविधिको प्रयोग गरेर मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने व्यवस्था access_timeभदौ ५, २०७६
काठमाडौं-सरकारले आधुनिक प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै प्रधानमन्त्री स्वदेश वा विदेश भ्रमणमा रहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले प्रधानमन्त्री बैठकमा प्रत्यक्ष उपस्थित नभएको अवस्थामा समेत भिडियो ‘कन्फ्रेन्स’लगायत...